Iyo yakamirirwa kwenguva refu vhezheni yeBlender 2.80 yakaburitswa | Kubva kuLinux
Iyo yakamirirwa kwenguva refu vhezheni yeBlender 2.80 yaburitswa
Darkcrizt | | Chigadzirwa
Iyo yakamirirwa kwenguva refu vhezheni yeBlender 2.80 pakupedzisira inouya kwatiri, sezvo sekutaura kwatainge tamboita pano pablog iyi vhezheni itsva yaive yakarongerwa mazuva aya, asi pakanga pasina chaiyo, saka kuburitswa kwayo kwaingove kumira.
Uye zvakanaka, vanhu vari kutarisira kusimudzira kweBlender, vanofara kuzivisa kuvhurwa kwemahara 3D modhi package Blender 2.80, iyo Yakave imwe yezvakakosha kuburitswa munhoroondo yeprojekti. Sezvo ichiwedzera akawanda maficha maficha uye inoenderera nekugadzirisa mashoma madudu.
1 Chii chitsva muBlender 2.80?
1.1 Eevee zvinowedzera
Chii chitsva muBlender 2.80?
Nekusvika kweiyi nyowani vhezheni yeBlender, aImwe yemitambo mikuru inomira pachena ndeye mushandisi interface yakagadziriswazve, iyo yave kuve inozivikanwa kune vashandisi vane ruzivo nemamwe mapikicha mapakeji.
Iyo nyowani yerima theme uye akajairika mapaneru ane emazuva ano icon seti akafanirwa pachinzvimbo chekutsanangurwa kwemavara.
Shanduko dzakabatawo mbeva / piritsi nzira dzekushanda uye hotkeys.
Matemplate uye nzvimbo yekushandira pfungwa zvinokurudzirwa (ma tabo), ayo anotendera iwe kuti utange nekukurumidza kushanda pane basa rinodiwa kana kushandura pakati pezvakasiyana mabasa (semuenzaniso, mifananidzo yekuveza, kudhirowa machira, kana kutevedzera mafambiro) uye zvinokupa iwe mukana wekugadzirisa chinongedzo kune zvaunofarira.
Yakanyorwazve Viewport modhi yakaitwawo, iyo inobvumidza iwe kuti uratidze iyo 3D chiitiko munzira iyo yakagadzirirwa mabasa akasiyana siyana uye inosanganiswa pamwe nekufamba kwebasa.
Uyewo, injini nyowani yebhenji yekupa injini yakatsanangurwa, yakagadzirirwa makadhi emifananidzo emazuva ano uye inobvumidza kushanda pamwe nekushandisirwa preview kana uchikanganisa nedanho dhizaini, modhi uye modhi yekuveza.
Injini Yekushanda inotsigira zvakafukidzwa, zvichikubvumidza iwe kuti uchinje kuoneka kwezvinhu uye gadzirisa zvakapindirana.
Kupeta kwazvino kunotsigirwawo paunotarisa kupa mhedzisiro neEevee uye maCycle zvinoshandurwa, zvichikubvumidza iwe kuti ugadzirise iyo chiitiko uine yakazara shading.
Iyo yeutsi uye moto simulation yekutarisa, iri padhuze nekupa mhedzisiro uchishandisa panyama chaiyo kupa, yagadziriswa.
Kubva pane iyo Eevee injini, nzira nyowani yekupa, LookDev, yakagadzirirwa, iyo inobvumidza kuyedzwa kweKwakawedzera Kupenya Ranges (HDRI) pasina kushandura marongero ezvinowanikwa mwenje.
TarisaDev maitiro zvakare inogona kushandiswa kuongorora iwo maCycle ekupa injini.
Zvakare Eevee yakagamuchira dudziro nyowani, iyo inotsigira chaiyo-nguva chaiyo chaiyo kududzira uye shandisa chete GPU (OpenGL) kupa. Eevee inogona kushandiswa ese ari maviri ekupedzisira kupa uye muwindo rePortport kugadzira zvinhu munguva chaiyo.
eevee inotsigira zvigadzirwa zvakagadzirwa uchishandisa shader node zvakajairika kune maCycle injini, ichibvumira Eevee kupa zvimiro zviripo pasina kumisikidza kwakasiyana, kunyangwe munguva chaiyo.
Kune vagadziri vemitambo yemakomputa zviwanikwa, Yakatemerwa BSDF shader inopihwa, inoenderana nemumvuri shader yemazhinji enjini dzemitambo.
MuBlender 2.80 tinogona kuwana nyowani yekudyidzana yekushandisa uye gizmo kune 3D Viewport uye iyo Unwrap Mhariri (UV), pamwe neyakajairidzwa mamiriro ekushandisa, ayo anosanganisira maturusi akange achingodaidzwa kuburikidza nenzira dzekukiya.
Gizmos yakawedzerwa kune akasiyana maficha, kusanganisira mwenje masosi, kamera, uye kumashure mamiriro, kugadzirisa chimiro uye hunhu.
Finalmente zvakare inoratidzira maviri-mativi ekudhirowa uye ehupenyu system, iyo Grease Penzura, iyo inokutendera kuti iwe ugadzire 2D sketches uye wozoishandisa mune ye 3D nharaunda sezvinhu zvitatu-zvidimbu (iyo 3D modhi inoumbwa zvichibva pamatanho akati wandei akaratidzika kubva pamakona akasiyana).
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve kuvhurwa uku pamwe nekuburitswa kweshanduro iyi nyowani unogona kubvunza chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chigadzirwa » Iyo yakamirirwa kwenguva refu vhezheni yeBlender 2.80 yaburitswa
Kubatana 3D, injini yemutambo yakagadziridzwa kune yayo nyowani vhezheni 2019.2